कामसूत्र भन्छ : सुहागरातको दिन पत्नीसँगको यौनबारे नसोच्नुस् ! « Khabarhub
कामसूत्र भन्छ : सुहागरातको दिन पत्नीसँगको यौनबारे नसोच्नुस् !
तपाइँले कामसूत्र बारे सुन्नु वा पढ्नु भएको छ ? छैन भने थाहा पाउनुस् । कामसूत्र हिन्दू धर्म दर्शनको एक महत्वपूर्ण कृति हो जसले भोग, वासना, यौन जीवन, यौन आशनबारे जानकारी दिन्छ ।
महर्षि वात्स्यायनले लेखेको कामसूत्रलाई विश्वको प्रथम यौन संहिता मानिएको छ । सात भाग बाँडिएको यो ग्रन्थ स्त्री र पुरुष दुवैले समानरूपमा अध्ययन र मनन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
आलिँगन, चुम्बन, स्पर्श, दाँत र नङ्को प्रयोग, सित्कार, यौन अङ्गको आधारमा स्त्री र पुरुषको बर्गिकरण, स्त्री र पुरुषमा हुनुपर्ने ६४ कला, वर्जित सम्बन्ध, स्वीकृत सम्बन्ध देखि कामक्रियाको समयमा अपनाउनुपर्ने विधि वारेमा वर्णन गरिएको यस ग्रन्थको विश्वका प्राय: सवैजसो भाषामा अनुवाद र उद्दरण गरिएको पाईन्छ ।
महर्षि वात्सायनले आफ्नो कृति कामसूत्रमा नारीलाई ४ प्रकारमा वर्गीकरण गरेका छन् ।
१.विवाहपछि पहिलो तीन दिन पति र पत्नी खाटमा नसुति जमिनमा सुत्नुपर्छ । आन्ददायी रुपमा सुत्नु र यौनलाई दिमागमा आउन दिन नहुने कामसूत्रको भनाइ छ । आर्थात विवाहको दिन सुहागरातका दिन नव विवाहित स्त्रीसँगको समागम बारे सोच्नु गलत हुन्छ ।
४. विवाहको दशौं रातमा पुरुष स्त्री तर्फ विस्तार बढ्नुपर्छ । वात्सायनका अनुसार महिला नाजुक स्वभावकी हुन्छिन् । र यौनको कुनै पनि हतारोसँग उनी डराउँछिन् । त्यसैले यस्तो स्थितिमा सायद उनी यौनबाट सधैका लागि डराउँन सक्छिन् । त्यसैले पुरुषले पहिला पत्निसँग नजिकिएर उसलाई अंगालो बेर्ने र यौनका लागि तयार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७६, शनिबार ५ : १५ बजे